Fifidianana · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Oktobra, 2018
Tonizia: Fotoana Fisoratana Anarana Amin'ny Fifidianana Izao
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Oktobra 2018
Nanomboka ny 11 Jolay 2011 ny fisoratana anarana anatin'ny lisi-pifidianana tao Tonizia ary hikatona ny 2 Aogositra 2011. Kanefa asejon'ireo antontanisa ny fisalasalan'ny Toniziana hisoratra anatin'ny lisitra. Izany no nahatonga vondrona iray ahitàna Toniziana mpanoratra bilaogy nanangana hetsipanentanana anaty aterineto hampirisihana ny vahoaka hisoratra anarana anatin'ny lisi-pifidianana Antenimieran-dalàmpanorenana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Oktobra 2018
Rosia: Hifidy sa Tsy Hifidy?
Eoropa Afovoany & Atsinanana 28 Oktobra 2018
Hifidy - sa tsy hifidy? ''Hifidy amin'ny tongotrao'' - sa hanaraka ny torohevitr'i Mikhail Khodorkovsky ary hifidy ny iray amin'ireo antoko kely indrindra tsy ''ambanianao''? Hanao ankivy ny fifidianana - sa hanimba ny vatom-pifidianana? Ho hahitsy tsara sy hanamarina ny iray amin'ireo efajoro kely fandatsahambato - sa ho lasa maditra ary hanoratra teny ratsy mameno ilay pejy?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Oktobra 2018
Olona firy no halatsa-drà vao hanan-jo hifidy ny Afghana?
Azia Afovoany sy Kaokazy 22 Oktobra 2018
Ny fifidianana nokasaina atao amin'ny 20 Oktobra dia antony iray hanehoana fankalazana saingy koa fialantsiny mba hanaovan'ireo mpitolona mitam-piadiana fanafihana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Oktobra 2018
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Oktobra 2018
(May 2008) Maty teo amin'ny faha-78 taonany i Shaikh Saad Al Abdulla Al Sabah, ilay mpitondra fahiny an'i Koety rehefa narary nandritra ny fotoana ela. Tohina tamin'ireo vaovao ny vondrom-piarahamonina an-tambajotra tao Koety, ka hafatra fangorahana sy fitsapana alahelo aman-jatony no niraradraraka nameno ireo blaogy amin'ny teny Arabo sy Anglisy. Nanambara telo andro ofisiaily hisaonana ny firenena - fa handeha araka ny efa voalahatra hanaovana azy ihany ny fifidianana parlemantera
Maniry ny hidiran'ny firenena ao amin'ny OTAN sy Vondrona Eoropeana ve ny Makedoniana? Ny fitsapa-kevi-bahoaka manan-tantara ho hilaza
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Oktobra 2018
Manontany mazava ny fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny 30 Septambra hoe: Mankasitraka ny fidirana ao amin'ny EU sy ny OTAN ve ianao amin'ny fanekena ny Fifanarahana eo amin'ny Repoblika Makedonia sy ny Repoblikan'i Gresy?'
Honduras: Lasa filoha ihany i Porfirio Lobo taorian'ny fifidianana nampiady hevitra
Amerika Latina 19 Oktobra 2018
Ny fifidianana dia efa nampiady hevitra satria fanohanana ankolaka ny fanesorana ny filoha teo aloha Manuel Zelaya tamin'ny volana Jona taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila. Tamin'izany fotoana izany, nandimby toerana an'i Zelaya i Roberto Micheletti, izay filohan'ny Kongresy Nasionaly, ary nandimby ny toerany mandra-pahatonga ny fifidianana tamin'ny volana Novambra 2009.
Maraoka : Fahafatesan'i Driss Basri, ilay ”mpivaro-kena”
Maraoka 18 Oktobra 2018
Maty tany Parisy i Driss Basri, ilay lehilahy mahery nandritra ny fitondran'i Hassan II izay nampangaina ho nahavita fampijaliana sy hetsika mahatsiravina.